Ingiriiska oo noqday dalka 3aad ee ladhiban Carona Virus.
Sunday May 03, 2020 - 16:03:54 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cudurka halista ah ee Carona Virus ayaa wali halaag ka geysanaya 50-ka gobol ee uu ka koobanyahay wadanka Mareykanka ee dhaca waqooyiga qaaradda America.
Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in shalay oo kaliya ay Carona udhinteen dad gaaraya 1453 qof American ah sida ay sheegtay jaamacad caafimaad oo soo saarta tirakoobyada ku aaddan dadka udhimanaya caabuqa Covid19.
Tirada guud ee dhimashada Carona uu ka geystay dalka Mareykanka waxay kor udhaaftay 67,224 qof halka dadka cudurkan labuko ee americanka ah ay ka badanyihiin 1.1 milyan oo ruux, wadanka mareykanka waa dalka koowaad ee dadkiisu ladhibanyihiin caabuqa Carona Virus oo halaag ba'an ka geysanaya wadamo ubadan reergalbeed.
dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 35 gobol oo dalkaas katirsan laga qaaday xaaladihii bandawga adkaa balse wali ay jiri doonaan xaaladaha feejignaanta ah, suuqyada waaweyn ee ganacsiga ayaa dib loo furay iyadoona aan wali lafurin goobaha waxbarashada.
Sidoo kale dadka Carona ugu dhintay dalka Ingiriiska ayaa sare ukacday wararka ka imaanaya magaalada London ayaa sheegaya in Ingiriiska uu unoqday dalka 3aad ee dadkiisu Carona ladhibanyihiin caalami ahaan.
dhimashada guud ee ingiriiska waxay gaartay 28,131 qof, kaalintan waxaa horay ugu jiray dalka Spain ee qaaradda Yurub.